कक्षा १२ को नतिजाः कुन जिपिए ल्याउने कति ? – Everest Dainik – News from Nepal
कक्षा १२ को नतिजाः कुन जिपिए ल्याउने कति ?
काठमाडौं, साउन १८ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एकैपटक सबै विषय समूहका चार लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको बिहीबार नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । विगतमा विज्ञान समूहको मात्रै पहिला नतिजा सार्वजनिक गर्दै आएकामा यसपटक भने ८१ दिनमा नियमित र आंशिक सबै समूहका चार लाख विद्यार्थीको नतिजा एकैपटक सार्वजनिक गरेको हो ।
परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार नियमिततर्फ दुई लाख ९९ हजार ६ सय ७५ र आंशिकतर्फ एक लाख १७ हजार चार सय १४ विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी भएका थिए । नियमिततर्फको पहिलोपटक लेटर ग्रेडिङमा र आंशिकतर्फको प्रतिशतमै नतिजा सार्वजनिक भएको हो ।
कस्तो छ जिपिए ?
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार जिपिए ३ दशमलव ६१ देखि ४ दशमलव ० ल्याउने एक हजार एक सय ६९ छन् । जिपिए ३ दशमलव २१ देखि ३ दशमलव ६० ल्याउने ११ हजार दुई सय २१ जिपिए २ दशमलव ८१ देखि ३ दशमलव २० ल्याउने २७ हजार ६ सय ४३ छन् । जिपिए २ दशमलव ४१ देखि २ दशमलव ८० ल्याउने ५८ हजार तीन सय ४५ छन् ।
सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी संख्या जिपिए २ दशमलव ०१ देखि २ दशमलव ४० ल्याउनेको छ । सो समूहमा ९० हजार दुई सय ९९ विद्यार्थी रहेका छन् । त्यसैगरी, जिपिए १ दशमलव ६१ देखि २ दशमलव ० ल्याउने ६६ हजार चार सय ३८ जिपिए १ दशमलव २१ देखि १ दशमलव ६० ल्याउने २२ हजार सात सय ३४ छन् । जिपिए ० दशमलव ८१ देखि १ दशमलव २० ल्याउने चार हजार चार सय ८७ र जिपिए ० दशमलव ०० देखि ० दशमलव ८० ल्याउने एक सय ९९ छन् ।
डी प्लससम्मलाई मौका
कक्षा १२ मा नियमिततर्फ कुनै एउटा विषयमा मात्र ई, डी वा डी प्लस ल्याएका विद्यार्थीलाई बोर्डले ग्रेड वृद्धिको मौका दिएको छ । एक विषयबाहेक अरू विषयमा सीभन्दा माथि हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कक्षा ११ मा जुनसुकै ग्रेड ल्याएको भए पनि कक्षा १२ को ग्रेड वृद्धिमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ग्रेड वृद्धि परीक्षा १६ भदौमा हुने तय गरेको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ट्याग्स: 12 Result out, national exam board